Mayelana Nathi - Shenzhen Mcldosly Tech Co., Ltd.
MCLDOSLYingumkhiqizi wesilawuli somdlalo wevidiyo oqeqeshiwe iminyaka eneshabhu yayo yokukhiqiza yobungcweti.Isibonelo, sinomugqa we-SMD wokuphesha isilawuli somdlalo nokubopha i-ic, kanye nesikrini sikasilika selogo eyenziwe ngokwezifiso, i-OEM ne-ODM yamakhasimende, kanye nelayini eyisithupha yokukhiqiza yokukhiqiza izisekeli zegeyimu kanye nelayini yokukhiqiza emibili yokupakishwa, kanye nokukhiqizwa okubili kokuhlola nesilawuli sokuhlola. ngaphambi kokuthunyelwa.Isilawuli Segeyimu yethu Njengesilawuli se-PS3, isilawuli se-PS4, izesekeli ze-PS5, isilawuli se-Switch Pro kanye nesilawuli se-Switch Joy-con, isilawuli seselula se-android ne-IOS nesilawuli se-xbox sidayisa kahle futhi siyashisa e-Europe, eMelika, empumalanga emaphakathi namazwe ase-Asia kulabo. abathengisi, izinkampani ze-e-commerce, izinkampani zamakhompiyutha nezinkampani ze-TV kanye nezitolo ezinkulu zesilawuli segeyimu.
Izilawuli zomdlalo we-MCLDOSLY ziklanyelwe ukwenza umuzwa wegeyimu we-Playstation ne-Nintendo Switch switch kunoma iyiphi inkundla yegeyimu ngokusebenza okulula, ukumatanisa okulula nokuxhuma, ukuqina okwedlulele nempilo ende yebhethri.Imiklamo ye-trigger ephelele kanye nezinti zokujabula ezichofozekayo zikwenza ujabulele umuzwa ogcwele wekhonsoli.Futhi kulula kakhulu ukubhangqwa nokuxhunywa nge-bluetooth noma i-USB, ipulaki futhi udlale ngokuqondile ku-Playstation, xbox kanye ne-Nintendo Switch Consoles Windows 7/8/10/XP/Laptop, PS3, Switch, Android, TV Box nge-bluetooth noma I-adaptha engenantambo ye-USB.Basekela ukudlala kwegeyimu engaphezu kwezinkulungwane zemidlalo ye-steam kanye namahora angu-10-20 okudlala ngebhethri ye-lithium ion.
Sinquma ukunikeza abadlali bamageyimu uhlobo lwamageyimu lwangempela ukuze bahlangane phakathi kwesiko lemidlalo lamageyimu.Izilawuli zethu zakhelwe ngokukhethekile lezi zingcweti zokudlala ezinganakiwe kanye nabathandi bemidlalo.Ukuzinikela kwethu okuyinhloko kuwukuchaza, ukuklama nokuthuthukisa abalawuli abanekhono eliphezulu nobuchwepheshe, ukuthuthukisa indlela yokudlala yemboni yemidlalo yamavidiyo kanye nokuqhubekisela phambili isiko lokudlala amavidiyo ezinyathelweni ezilandelayo.
Sinikeza ukukhiqizwa okusheshayo nesikhathi esifushane sokulethwa kodwa insizakalo yesilawuli sekhwalithi yokukhiqiza eqinile, yamukela noma yimiphi imibuzo kanye nephrojekthi ye-OEM ne-ODM